Sawirradi Xafladi ku Dhawaaqidda Musharaxnimada Madaxweynenimo ee Jabriil Ibraahim Cabdulle
admin Sept. 20, 2016, 6:53 a.m. 973
Xafladdu waxa ay kubilaabatay dardar xoog leh ayadoo dadweynuhu wadooyinka iyo albaabada hoteelka ay soo buux dhaafiyeen saacado ka hor xiliga loo balansanaa inay xafladdu bilaabaneyso.
Dadka ayaa aad u qiireysnaa wejiyadoodana laga dheehanayay rajada weyn ee ay ka qabaan in dalkoodi markale uu heli karo hogaamiye badbaadinta dalka iyo dadka lagu aamini karo.
Inkastoo wadooyinku ay xirnaayeen hadana dadku waxa ay muujiyeen inaan laga hor istaagi karin hogaamiyaha ay muddo labaatan sano kabadan ku taamayeen inuu imaan doono.
Dadka ayaa sidoo kale waxa ay isdhaafsanayeen hambalyo iyo bogaadin ku aadan in Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle uu ka aqblay codsigoodi ay horay usoo jeediyeen ee ahaa inuu ka qeyb galo doorashadan si dalku uu uga badbaado dhibaatada uu hadda kujiro.
Hoos waxaad ka daawan doontaan sawiradi xafladda iyo sida habsamida leh ee dadku usoo dhaweeyeen Mudane Jabriil iyo dhaqdhaqaaqa Hal Qaran oo muddo dheer cadaadis ku hayay Mudane Jabriil inuu aqbalo codsiga dadweynaha.
bayaan said: Inta geelo dheeryahay xoolaha intooda kale ayuu Mudane Jibril Musharaxiinta kale dheeryahay....
Sept. 20, 2016, 8:34 a.m.,
1 reader(s) liked this.
bayaan said: Muwaadin Daacad ah ayaan doneynaa, dalkeyno dhismo ayaan dooneynaa, dib u heshiisiin dhab aha yaan dooneynaa, isku duubni ayaan dooneynaa. ciidanka dalk in loo dhiso ayaan dooneynaa, daryeelka dan yarta ayaan dooneynaa, dulli laga gudbo ayaan dooneynaa,
War daba qabta Soomalyey; oo doorta yalyaaga ayadoon dowlad jirin dad badan badbaadiyay.
Sept. 20, 2016, 9:13 a.m.,